2016 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
လူတစ်​​ယောက်​ ဆိုင်​ကယ်​​မှောက်​လို့ ​ဆေးရုံ​ရောက်​လာတယ်​။
သတိ​​​မေ့​နေတဲ့သူ့ ကို အထူးကြပ်​မတ်​ကုသ​ဆောင်​မှာထားပြီး ကုသ​ပေး​နေရတယ်​။
သူ့အခန်းထဲ သူနာပြုဆရာမတဦး ၀င်​လာတယ်​။
ဆရာမကိုမြင်​​တော့ သတိပြန်​ရ​နေပြီဖြစ်​တဲ့ လူနာက ​မေးတယ်​... ...
မိသားစု တစ်ခုစီကနေ မွေးဖွားပြီး
အကြောင်းမဲ့ ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အတူပြုခဲ့ကြတဲ့ ကောင်းမှု ကုသိုလ်
သဒ္ဒါ သီလ စာဂ ပညာတွေ
"ဒါဆိုရင် ကြက်ဥအစိမ်းစားကြည့်ပါလား?" လို့ အဘွားကဆိုတော့ မြေးက "ဘွားဘွား ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ? ဒါတွေက အရမ်းစားရခက်တဲ့ အရာတွေပါ" လို့ဆိုတယ်။
ကွန်​ပြူတာကို wifi ချိပ်​ပြီး သုံးချင်တဲ့အ​ခါ သူငယ်​ချင်းရဲ့ ဟိုတယ်​မှာ သွားသုံးရတယ်​။
​ဟော်​တယ်​​ခေါင်​မိုးထပ်​မှာ dining room ရှိ​လေ​တော့ အဲ့ဒီမှာ သွားထိုင်​ပြီး သုံးရပါတယ်​။
အဲရ်​ကွန်းနဲ့ sky net TV နဲ့ ဆို​တော့ ဟန်​ကျတယ်​။
ကိုယ်က ​သူ​​ထေးရဲ့သူငယ်​ချင်းဆို​တော့ ​ရေ​နွေးကြမ်းနဲ့ ​ကော်​ဖီလည်း အလကားတိုက်​တယ်​။
တက္ကသိုလ်တက်စဉ်က ကွန်ပျူတာ မပေါ်သေးဘူး။ တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ကို နေ့တိုင်းသွားတယ်။ စာဖတ်ခန်းထဲမှာ ထားပေးထားတဲ့ Encyclopedia တွေကို တစ်အုပ်ပြီးတစ်အုပ်လိုက်ဖတ်တယ်။ ကူးစရာတွေ ထိုင်ကူးတယ်။
ကွန်ပျူတာနဲ့ Encyclopedia တွေကြည့်လို့ရတဲ့ခေတ်ရောက်လာတော့ စီဒီတွေ ဝယ်စုပြီးဖတ်တယ်။ အဲဒီထဲက အကြောင်းတွေကို စာရေးတယ်။ Encyclopedia တွေရှိနေသမျှ ထမင်းမငတ်တော့ဘူးလို့ သိလာတယ်။
Author: lubo601 | 9:23 PM |2Comments |
အသက် ၂၀ တုန်းက အိမ်မှာနေတာနဲ့ ခရီးသွားတာ သိပ်မကွာလှပါ။
ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် ခဏလေးနဲ့ အကျွမ်းတ၀င်ဖြစ်သွားတယ်။
အသက် ၃၀ မှာ နေ့တာနဲ့ ညတာ သိပ်မကွာလှပါ။
ဘယ်နှစ်ညပဲ အိပ်ရေးပျက်ပျက် ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲ။
အသက် ၄၀ ရောက်တော့ ဘွဲ့ရတာနဲ့ ဘွဲ့မရတာ သိပ်မကွာလှပါ။
ကျောင်းမပြီးလိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ၀င်ငွေပိုကောင်းနေသလုိုပဲ။
တော့ဘူး။ စာရေးပြီး ပြောပြတာပဲ တတ်နိုင် တော့မယ်။
အဝေးကြီး ရောက်နေလို့ပါ။ ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာ
နောက်ပြီးမှ ပြောပြမယ်။ ဒီရောက်ရောက်ချင်း သမီး
နဲ့သားကို သတိရစရာတွေ့တာပဲ။ ဘာလဲဆိုတော့
သမီးနဲ့သားတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းပေါ့။ ကိုယ်
သိထားတာ အမြဲမှန်တယ်လို့ ထင်နေရာက နောက်ထပ်
အမျိုးမျိုးလည်း ရှိသေးတယ်ဆိုတာ သိရင် အမြဲအံ့သြတယ်၊
ပြီးတော့ သဘောကျတယ် မဟုတ်လား။
နေပြည်တော်အမြန်လမ်းဆိုတာကြီးကို နိုင်ငံပိုင်ငွေကြေးမြောက်များစွာ အကုန်အကျခံပြီး ဖောက်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။
တရုတ်ပြည်မှာ လမ်းဖောက်တာ အစိုးရကတပြားတချပ်မှအကုန်အကျမခံဘူး။ပုဂ္ဂလိကကို အကုန်အပ်လိုက်ပြီး လမ်းကြေးကောက်ပြီးပိုက်ဆံပြန်ရှာစေတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ ခွေးသူခိုးတွေက နိုင်ငံပိုင်ပိုက်ဆံတွေနဲ့ အမြန်လမ်းကြီးကိုဖောက်ခိုင်းတယ်။ GEတို့ဆောက်လုပ်ရေးတို့နဲ့ပေါင်းပြီး ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေ ပက်ပက်စက်စက် ခိုးပွဲကြီးဆင်နွှဲကြကာ ကျိကျိတက်ချမ်းသာသွားကြတယ်။
သူ့နံဘေးကမိန်းမက ကျွန်မလည်း အဲဒါပဲမှာလိုက်တာလို့ ပြောတော့ သူက
"ကျွန်တော် ကတော့ ပျော်စရာကြုံလို့ ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သောက်မှာ"လို့ ဆိုပါတယ်။
ရှိနေလို့ ဝိုင်နီမှာ သောက်တာ "လို့ဆိုတော့ အမျိုးသားက ဘာများလဲ
လို့ မေးတော့"ကျွန်မတို့လင်မယားက အိမ်ထောင်ကျတာကြာပြီ။
ကောလာဟလ မဟုတ်ဘူး။ ကောလာဟလက ပြောရင်းပြောရင်း ချဲ့ကားလွဲမှားကုန်တာကို ပြောတာ။
၁။ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းအတွက် (၅)မိနစ်အချိန်ယူပါ။
စိတ်ကူးပုံဖော်ပါ။ အသက်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ရှူထုတ်၊ ရှူသွင်းပါ။
ထိုပုံစံအတိုင်း တစ်ရက်ကို ၅ မိနစ်အချိန်ပေးပြီး လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်
တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးသွားသမျှ အားအင်တွေကို ပြန်လည်ရရှိစေသလို နောက်
တစ်နေ့တာရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်း ခွန်အားအပြည့်နဲ့
၂။ အတွေးတွေကို တည်ဆောက်ဖို့ (၅ မိနစ်)အချိန်ယူပါ။
စိတ်လက်မကြည်မလင်နဲ့နိုးထလာရတဲ့ နံနက်ခင်းတစ်ခုဟာ တစ်နေ့တာလုံးကိုပါ